Maitiro ekumisikidza iyo "Kushambidza maoko" paApple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekugonesa "Kushambidza maoko" paApple Watch
Imwe yesarudzo dzinopihwa neApple muWatchOS vhezheni ndiyo "Kushambidza maoko" izvo vazhinji venyu muchatoziva. Ichi chiito icho nhasi chazove chakakosha kwazvo kwatiri nekuda kwedhongi bhaini iro rinomhanya mumigwagwa Iyo yekutanga yakavharwa paApple Watch uye nhasi tichaona maitiro ekuishandisa.
Iyo inhanho inodikanwa sezvo avo vanobva kushanduro dzepamberi dzeWOSOS neIOS vane sarudzo iyi yaitwa, saka ticharangarira nhanho dzinofanirwa kuteverwa kuti dzishande. Chinhu chakanyanya kukosha mune iyi kesi ndeche shandisa zviziviso paunosvika kumba kana tiri vamwe vevaya vanokanganwa nezveichi chiito chakakosha nhasi. Ngatione maitiro ekuishandisa pakutanga, izvo zviri nyore kwazvo.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche vhura iyo application pane wachi pachayo uye shandisa purogiramu. Kuti tiite izvi, tinoenda kune iyo Zvirongwa kuti tinyore paWashwashing timer uye nekuishandisa. Kana tangoita nhanho iyi, tinogona kugamuchira kuti wachi inoona nenzvimbo patinopinda mumba kutiyeuchidza nezvekugeza maoko, kunyangwe kuwedzera zviyeuchidzo nezviyeuchidzo.
Apo Apple Watch inoona kuti unotanga kugeza maoko ako, inotanga 20-yechipiri timer. Kana iwe ukamira pamberi pemasekondi makumi maviri, iwe unokurudzirwa kuti uapedze. Kuti upe kudedera kana wapedza nguva, batidza Vibrations pane iyo "Kushambidza Maoko" skrini.
Iye zvino tava kuzoona imwe sarudzo yakakosha kuziva uye ndeye avo vane Apple Watch yakagadzirirwa hama. Mune mhando iyi yekumisikidza isu tinotonga pamusoro peiyo wachi uye inotarisana nevadiki kana vanhu vakuru vasinganzwisise zvakanyanya kuti wachi inoshanda sei. Mune ino kesi, nhanho dzakafanana asi isu tinofanirwa kuve nekero yekumba yakasimbiswa pane yako kadhi mune Yekubatana app pane iyo iPhone.
Kuti tione data revhareji yenguva yatinoshamba maoko edu, isu tinovhura iyo Hutano app pane iyo iPhone uye tinya pa Ongorora> Dzimwe dhata> Kugeza maoko. Pakutanga hatizove nedata asi izvi zvinochengetwa muchikamu chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugonesa "Kushambidza maoko" paApple Watch
Teregiramu yeMac yakagadziridzwa kuita vhezheni 7.2
Apple inoramba App yekusimbiswa kwemavhoti musarudzo dzemutungamiri wenyika